Wasiir Goodax oo kormeer ku tagay goobaha uu ka socda imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga sare”Sawirro” – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Wasiir Goodax oo kormeer ku tagay goobaha uu ka socda imtixaanka Shahaadiga ee Dugsiga sare”Sawirro”
By Abdihakim Sharif Ali / May 27, 2019 May 27, 2019
Muqdisho(SONNA):- Wasiirka waxbarashada xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodaax barre ayaa maanta kormeer ku tagay inta badan goobaha uu ka dhacayo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ee maanta ka biloowday dalka.
Wasiir Cabdulaahi Goodax Barre ayaa waxa kormeerka ku wehlinayay Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo Guddoomiye ku xigeynka dhanka arrimaha bulshada gobalka Banaadir Basmo Caamir iyo xubno kale oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo maamulka gobalka Banaadir.
Wasiirka waxbarashada iyo xubnihii la socday ayaa kormeerka ka bilaabay Jaamacadda Ummadda qeybaheeda ay ka koobantahay Gobalka Banaadir ee imtixaanku ka Socday iyo iskuulka almacaarif oo ay ku sugnaayeen arday araga aan wax ka arag iyo xarumo kale oo dhamaantod ku yaala gobalka banaadir.
Wasiirka waxbarashada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi goodax bare ayaa kormeerka kadib waxa uu ka hadlay habka imtixaanka uu ku biloowday.
"Maanta waxaan kormeer ku tagay qaar ka mid ah iskullada ku yaalla magaalada Muqdisho oo maanta uu si rasmi ah uga bilowday imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka,"
Imtixaankan waxaa u fadhiistay sodon iyo kow kun iyo shan boqol oo ardey oo ku kala sugan gobolka Banaadir iyo gobollada dalka.
"Waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed oo runtii kaalin muhiim ah ka qaatay habsami u socodka imtixaanka waxaan la kulmay shaqo aad u qurux badan iyo ardey firfircoon oo raba in aqoontooda iyo garaadkooda iyo dadaalkoodii labo iyo tobanka sano ay soo wadeen in ay muujiyaan" ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Goodax ayaa sii raaciyay"Dhammaan ardeyda waxay noo sheegeen inay ku faraxsan yihiin inay markale galan imtixaanka iyaggoo nagu tageeray qaabkii aan u joojinay imtixaankii hore mar hadii uu fashilmay sababtuna ay tahay in ardagu waxa uu shaqeystay uu ku meel maro midka aan shaqeysana islamarkaan doonaya in uu iibsado uusan ka buunda sarey ardeyga dadaalaya.
Wasiirka ayaa dhammaan ardeyda Soomaaliyeed waxa uu u rajeeyay guul iyo horumar.